Tag: ọrụ onwe onye | Martech Zone
Kpido: ọrụ onwe onye
N'ehihie a, m na-enyere onye ahịa aka nke gbakwunyere asambodo maka SSL ma weghaara www ha na URL ha. Iji gbanwee okporo ụzọ nke ọma, anyị kwesịrị ide iwu maka Apache na faịlụ .htaccess. Anyị nwere ọtụtụ ndị ọkachamara Apache na enwere m ike ịkpọtụrụ maka azịza ya, mana kama, m na-achọ ihe ọmụma ọmụma ole na ole n'ịntanetị wee chọta azịza kwesịrị ekwesị. Enweghị m ịgwa onye ọ bụla,
Monday, November 12, 2012 Satọdee, Nọvemba 10, 2012 Douglas Karr
Otu ụzọ isi melite njigide ndị ahịa yana afọ ojuju ndị ahịa ọ bụla bụ ịmịpụta ọdịnaya na-enyere ndị ahịa aka inyere onwe ha aka. Ọbụghị naanị na enwere mmụba na afọ ojuju ndị ahịa, enwere ọnụọgụ ego-metụtara ndị ahịa anaghị ekekọta usoro ọrụ ndị ahịa gị. Kwusa ihe ọmụma gị, ajụjụ a na-ajụkarị, snippets na ihe atụ ebe engines ọchụchọ nwere ike ịchọta ha na - eme ka nke a kwe omume - ịghara itinye ha n'azụ nbanye maka ụjọ nke ndị asọmpi ịchọta ha. Na-adịbeghị anya ọmụmụ na-agwa
Ọ bụrụ na ị dị ka m, ị na-eleda mmekọrịta ndị ahịa anya. Ọ bụghị na enweghị m mmasị na ndị mmadụ - ha na-eme ike ha niile. Ma ọtụtụ mgbe, anaghị m ama nsogbu m na-ese karịa ha. Achọghị m ịnọdụ ala na ekwentị ijide 5 nkeji, mkparịta ụka maka 15 nkeji, na-esote ịrị elu na nchekwube na nkọwa. Imirikiti okwu m na-edozi onwe m, ma ọ bụ na m na-atụgharị